Apho Kuhlangana Filipinas Phandle Malunga
Ukuba mna ke abahlala kuyo KUTHI ke njengoko aggressive malunga ehamba ukuya kwi-girls kwaye zinika kwabo wam inani njengoko ndikunye pinays ndinga kusenokwenzeka kuba ejele nge ngoku, kwaye ngexesha noko ndiza kuba ‘i ukusuka zonke i-malls engqonge apho mna waphila. Enyanisweni akukho nto okungalunganga, ehamba phezulu, ukuze kubekho inkqubela, ndizixelela wakhe yena ngu aph, kwaye zinika yakhe yakho inani. Akukho kwenzakala akukho foul, kwaye ukuba ingaba ngenene kangakanani into ndiyakwenza. Kodwa ndim iselwa ezithile ukuba ndazenza kangangoko kukho njengoko ndenzayo apha engalunganga izinto ingaba kwenzeka. Ndine zinikezelwe ngaphandle wam inani phezu, phinda-phinda lento ophelileyo. Ngomhla wokuqala, ndabhala kuphela imivo kwiphwetsha kwaye ukuba ifumene kum a minuscule ezintlanu umbhalo kubuya umva. Ngoko ngenye imini ndagqiba ukuqala yokubhala witty kwaye aph imiyalezo kwi nabo kwaye ipesenti jumped ukuba malunga ne. Ukuba ngu-a kakhulu ngcono kubuyela kwi-bam lengthy xesha utyalo-mali ngenxa yokuba kukho iintsuku apho ungaya a mall kwaye hayi kubona kubekho inkqubela kukunceda kakhulu approaching kwiyure. Okanye kuphela okkt ubona ingaba ehamba isandla sakho kuzo isandla sakho nge boyfriend, okanye nge zabo mom, okanye ngenye indlela engalunganga amachaphaza. Isaziso mna kukhankanywe – mall kwaye ukuba ngokucacileyo eyona ndawo ukwenza yakho indlela. Kufuneka nje kufuneka uqinisekise yenze kunye abanye intlonipho, ncuma, kwaye musa kuba kakhulu pushy ukuba kubekho inkqubela ngokucacileyo hayi anomdla. Ukuba mall ngu-eyona ndawo, ngoko ke street ngu ngokuqinisekileyo eyona imbi le ndawo mna uzamile. Kuba obvious izizathu Filipinas ingaba kakhulu leerier ye-jikelele guy approaching kwabo ngomhla street ke ngabo ngaphakathi kwe-mall. Ukuba ndiya kubona zinokuphathwa kubekho inkqubela kwi street, ndibe zama ngayo, kodwa idla okokuba. Enye into ndifumanise kukuba kuba abanye isizathu sokuba nicer indawo yesixeko kufuneka basemazweni ngakumbi kusenokwenzeka ukuba ungafumana umbhalo umva. Ndinga nani amahlwempu impoverished girls ibizakuba okkt ezingekho ngaphezulu onemincili ukuhlangabezana”otyebileyo”foreigner, kodwa oko ngokwenene imisebenzi engcono kunye ngaphezu koko-ngaphandle girls. Ngoko ke, ukunyamezela okokuba engqondweni xa ucinga apho kuhlangana Filipinas. Xa ndandiqala waqala ngokwenza oku, mna ke ukuza kuthi ga ngoku shyer malunga oko kunokuba ndinguye ngoku. Kunokwenzeka ngokwenene awkward xa ufaka handing a kubekho inkqubela a enye ka-iphepha kwaye yena uphumelele khange thabathani, okanye yena ugcina ecela”yintoni leyo.”kwaye ngokucacileyo komhlaba kodwa uphumelele khange hlasi kuyo. Xa wena wenza indlela yakho, kwaba mnandi vula indawo kwi-mall kunye akukho namnye elindile, ngoku uqinisekile ukuba approaching a crowded indawo kunye ezininzi amehlo ubukele wena zonke ufuna ukwenza ngu GTFO ka-phaya. Ezona awkward ixesha kuba kum wathi kuba ngomhla Greenbelt Mall kwi-i-manila. Ndajika yembombo kwaye wabona le kakhulu sexy pinay owaye a solid isibhozo mhlawumbi kwa alithoba ukuba isebenza ngendlela shoe store eshiya yakhe store. Bendisele elinesihlanu iinyawo zakhe ngasemva kwayo kwaye uqaphele ukuba indimbane thinned ngaphandle ozayo, ngoko ke, mna ndalinda ngenxa yam ndawo kwaye wangena ngaphakathi. Akunjalo njengoko ndithi molo uze umxelele yakhe njani pretty yena ngu yena yiyo eyenza jika kwi iholo kuba bathroom. Yena ufumana shocked kwaye uthi enkosi kwaye ndizama ukuba isandla yakhe wam ll qaphela. Yena ayi na into omawuyenze kwaye ke amadoda ke, bathroom ucango ivula, kwaye ezintathu guys zama ukuhamba ngaphandle ngaphandle kokuba ucango pushes kwi yakhe. Ngoku abafazi ababini kwi-jika ukususela mall icala, kwaye ndiya kuba wenza abanye. bottleneck kwaye kubekho inkqubela ngu halfway reaching kuba iphepha kwaye yokufumana pushed yi-ucango. Izinto ngathi ukuba kunokwenzeka amaxesha ngamaxesha, bamele awkward kwaye embarrassing kodwa nantoni na. Mna ngqo kokuba i-craziest umzamo malunga kwinyanga edlulileyo. Ndandinjalo, ehamba i-mall kuba yure kwaye zinikezelwe ngaphandle wam inani kabini. Mna kokuba sele ilungisiwe a meal kuba takeout kwaye waba kwi-indlela yam ukukhetha kuya phezulu kodwa zifunyenweyo ngokwam ngasemva hottest sexy pinay ndiwubonile ngenyanga. Kodwa ukususela ukuqala babebaninzi red flagstaff A) wayengomnye pushing a baby stroller, B) wayengomnye kunye ezintathu – enye Filipino abafazi. Ndiza kanye iselwa na kwaba yakhe mom kwaye omabini wakhe oodade. Ngokuqhelekileyo oku akukho brainer ukuba mna kudlula, kodwa kwakhona lo hottest pinay ndizibonile ngenyanga. Ngoko ke, mna zama ukufumana ilungelo indlela ndawo kwaye nje wam comment ngabo ehamba omnye restaurant ndidinga ukukhetha wam ukutya ukusuka phezulu. Ngoku mom kwaye omnye oodade kuhamba kuyo kwaye ezinye omnye pulls ngaphandle kwayo ifowuni ngoko ke, nakanjani, mna ngokwenene ukufumana wam esifutshane. Mna nyuka uze umxelele wakhe yena nguye ebukeka kubekho inkqubela ndizibonile kwi-Persia, isandla yakhe inani, kwaye scurry ngaphandle. Ngoku ndina ukufumana wam sangokuhlwa. Ndithe sele ihlawulwe kuba kubhaliwe kwaye andinguye alahle kude dollazi ezintlanu phezu zeentloni. Ndiya a ezikufutshane store kwaye uzame bribe i kubekho inkqubela ukusebenza apho ukuya chonga phezulu wam ukutya, kodwa yena ngu freaked ngaphandle yi-andwebileyo rambling foreigner kwaye ithi akukho nasemva kokuba ndiya kunikela imali. I restaurant sele glass windows kwi-phambili kwaye kubekho inkqubela ngu ngokuqinisekileyo ihleli injalo nge-ucango. Ndiya kuma nge-yembombo kwaye luckily get umncedisi ke ingqalelo ukuba wakhumbula kum waza wazisa wam ukutya ngaphandle kum. Yena zange texted kwam, kwaba ngenene i-eyoyikekayo isigqibo, kodwa yena waba ngenene zinokuphathwa, kwaye ndinga zama ke kwakhona ukuba faced kunye iyafana kwixesha elizayo. Mna ke ngoko ulingeka ukuthumela Dante ke super-imfihlo patented umyalezo ngoku ngenene nangona nantoni na ukuze lenza k ubonakala ngathi njenge nani asikwazanga phambi-bhala ke ukuba isandla phandle s ka-girls ingaba umsebenzi. into mna andinaku ngenene share zam, mna anayithathela sele papered i-malls apha kunye, kwaye akasoze kuba ezinye guys usebenzisa kuyafana nje qiniseka ukuba ufake i-smiley okanye ezimbini kuyo, cinga into babe ngathi ukufunda, kwaye zama kwabo ngaphandle Yam kuphela umbuzo ingaba yimalini ke bribe ndanikezela kuni ukuze kubekho inkqubela ukuba wouldn khange chonga phezulu yakho ukutya kwenu. Ndiyazi ke umntu wesithathu ihlabathi lizwe kodwa apha lol wayengomnye abayo coworker kwaye bobabini wajonga e kum ngathi mna ke ukuzama scam kwabo, ndicinga ukuba wanikela njenge amahlanu pesos, mna wouldn ukuba uhlawule nawuphi na ngaphezu ukuba ukuphepha kancinci zeentloni Into, unezinto ezininzi ixesha ehlabathini ukuphunyezwa yakho inani ngaphandle. Uninzi ibhinqa musa umnxeba. Guys kufuneka umnxeba kuqala. Kule ndawo Pina uthando ingaba omkhulu scammers. Baya block wam free akhawunti, kwaye baya block kuyo.
Ndidinga imali yeenkonzo. Baya ufuna ukuthumela kum omtsha MSN ikhowudi i-butt baya musa ukwenza oko. ISILUMKISO KUBA PINALOVE SITE.
Kwaye baya kuba ufuna intlonipho. Yintoni intlonipho. Mna bonisa rhoqo ngokubhekiselele kwi-elonyuliweyo, s andizange kuba ngesondo incoko. Ngenxa yokuba mna bonisa ngokubhekiselele rhoqo. Hmm mna anayithathela zange kubekho ingxaki ubuqu. Ngaba akhange na imali kuba kubhaliwe kanti ke ngoko kwenzeka njani a scam.
Ngu free site
Ukuba babe isithinteli-akhawunti yakho, kuthatha ezintlanu mins ukwenza entsha enye kwaye kwangoko nje umyalezo efanayo girls kuwe messaged kuba free ngaphandle ukubhatala. Mhlawumbi abanye kubekho inkqubela kusini na kuni falsely, ngoko ke baya ezivalekileyo kwenu, kuya kwenzeka
← FILIPINO LENCOKO. FILIPINO INCOKO Filipino lencoko. Free Ifowuni Incoko Imigca Izilingo. Los Angeles Ifowuni Incoko
Eyona Dating Zephondo kwi-Persia ukuhlangabezana Girls Persia Redact →